Misy tsy milamina ao … | GAZETY_ADALADALA
Misy tsy milamina ao …
Posted on 28/12/2009 by gazetyavylavitra
Tsy asiako resaka betsaka fa dia tsoriko amin’ny hoe misy tsy milamina ao anivon’ny tafika ao. Nandritry ny vaovaon’ny Radio Antsiva no heno izany fa nisy miaramila avy ao amin’ny RAS Amparibe niantso ny namany mba ‘hanamboatra’ ity firenena ity amin’ny fahaizany azy. 15 na 16 teo ho eo no namaly ny antso. Ho hita eo ny tohiny.
Fa teny anjoron’izay kosa dia sahotaka tsy nisy toy izany no niainana teo Soarano sy iny ambadiky ny Institut d’hygiene Social mankany Ambodifilao iny. Nijolofotra saiky nipoaka mantsy ny tobin-dasantsy Shell ao ambadiky ny tranoben’ny Firaisana Voalohany. Tongotra ankatoka no nataon’izay nandeha an-tongotra, mba hanalavirana ilay toerana. Foana vetivety ny fiara fitaterana sy izay nentin-tahotra rehetra. Izay tsy nahafoy fananana noho ny tahotra ny mpanararaotra kosa sisa no tavela (na nijanona) teo amin’ny toerany. Nivadika haingana nankany afovoan’Analakely ny diako raha toa ka taty Ambodifilao no noheverina hizorana. Indreny ny Fiaraben’ny mpamonjy voina (pompier) avy ao Tsaralalana nfa voabahan’ny fitohanana iarahan’ny rehetra miaina isan’andro, amin’iny lalana avy any Tsaralalala mankany Behoririka iny. Raha izany no nisy ny tena hamehana tanteraka, dia efa faty mikararana no teo Analakely satria ny fiara tsy afa-nihetsika, ny olona an-jatony (na an’arivony mihitsy) no mivoivoy tsy mahalala na inona na inona akory amin’izay miseho ao aloha kely ao. Dia tsy hahagaga aloha raha haheno isika rehetra fa hoe be indray no voan’ny mpanararaotra nanditra iny fotoana fohy iny. Famelezany mihitsy mantsy ny toy ireny.
fanampim-baovao : hanongana ny tetezamita no tanjon’ireo miaramila vitsivitsy izay voalaza fa niantso ny namany ‘hanamboatra’ ity firenena ity. Tany amin’ny manodidina ny amin’ny iray ora maraina no nambara fa niantombohan’ity resaka ity, ary fotoana vitsy taorian’io dia efa voahodidin’ny miaramila ny toby.
Nisy ny fizarana vola tamin’ireo miaramila nantsoin’ilay Adjudnat Chef. Araka ny tatitra dia misy ny manamboninahitra ambony tafiditra amin’ity raharaha ity izay voalaza fa tsy niditra mivantana tao amin’ny RAS Ampahibe fa niandry kosa taty ivelan’ny toby. Ilay Adjudant Chef ihany izany aloha no tena voatondro mivantana ary efa nosamborina sy eo ampela-tanan’ny zandary mba hanaovana famotorana. Misy koa moa filazana fa misy mpanao politika koa ao ambadik’ireto manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra ireto. Hatreto aloha dia tsy mbola nisy ny fanomezana anarana. Fa na ny mpanao gazety aza dia tsy navela hiditra ilay faritra tamin’io maraina io.
Nilaza ny Praiminisitra miaramila Vital Camille fa tsy hilefitra amin’izay mitetika korontana ary nampitandrina mafy izay mikasa hanao izany eo anivon’ny tafika sy ny foloalindahy Malagasy.
Filed under: fiaraha-monina, tapatapany | Tagged: Ambodifilao, Ampahibe, Analakely, Behoririka, camille vital, Firaisana voalohany, pompier, SHELL, Tsaralalana |
« Nodimandry i Jacques Sylla Ny AGOA araka an’i Ismael Razafiniarivo… »